राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचका द्धन्दले सरकार निमार्णमा बिलम्ब « Sherpa media Group Nepal
प्रकाशित मिति : १० पुष २०७४, सोमबार १३:१५
आमनिर्वाचन सम्पन्न पछि जनतामा उत्साह छाएको थियो । राजनितिक अस्थिरताको अन्त्यसगै मुलुकले आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो पहिल्याउने छ भन्ने विस्वास जनतामा जागेको थियो । निर्वाचन आयोगले सामानुपतिक तर्फको मत गणना सार्वजानिक गर्न राष्ट्रिय सभाको गठन अपरिहार्य भएको कानुनी प्रवधान सार्वजानिक गरे सगै केही जटिलता उत्पन्न भएको छ । राष्टिय सभा गठनको लागि सघिंय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिचिता आवश्यक रहेको र त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा गठन अनिवार्य रहेको देखिन्छ।
ससंदबाट राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि कानुन पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत कार्तिक ३ गते राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेस जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । त्यो अध्यादेस स्वीकृत नगरेर अहिले परार्मशको नाममा विलम्ब गरिनुले सरकार र राष्ट्रपति बीच नया द्धन्द सुरु भएको छ । जुन आवश्यक थिएन । नेपालको सविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिको भुमिका सवैधानिक रुपमा सेरेमोनियल हुने प्रवधान रहेको छ भने मुलुकको राजकीय र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदमा निहीत राखेको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार परामर्शदाता जे भने पनि प्रधानमन्त्री नै हुने स्पष्ट सवैधानिक प्रावाधान छ। यति स्पष्ट हुदाहुदै पनि किन र के कारणले अध्यादेस जारी हुन ढिला भईरहेको छ ?
त्यो स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि आध्यायदेस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि राजनैतिक सहजता अगाडि बढ्ने कुरामा ढुक्क देखिनुहुन्छ । सरकार राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धि अध्यायदेस स्वीकृत भएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्न तयार देखिन्छ यसपछि मात्र प्रतिनिधी सभाले पूर्णता पाउनेछ र नया सरकार गठनको सवैधानिक र कानुनी मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ ।
यसक्रममा राष्ट्रपतिले दुई महिनापछि आएर अध्यायदेस स्वीकृतिमा आनाकानी देखाउनु र नेकपा एमालेको अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आएपछि अध्यायदेस स्वीकृत हुदैन भनेर सार्वजानिक गर्नुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको द्धन्द सतहमा ल्याएको छ सवैधानिक मुल्य र मान्यताको समेत अवमुल्यान भएको देखिन्छ । यसै सन्र्दभमा गत
राष्ट्रपति र कांग्रेस नेताहरूसँग भएको परार्मश र सम्वाद ‘अहिलेको गतिरोधको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने बारे भएको स्रोतहरुको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘तपाईले बोलाउनु भएको हो हामीलाई। पहिले तपाईंको कुरा सुनौं। मैले त आफ्नो कुरा पहिला नै बताएका थिए ।’
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कुरा यसरी राखेको सेतोपाटी अनलाईनमा प्रकाशित भइसकेकोे छ। जुन यस प्रकार छ ः,
‘मैले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लैजानुहोस् भनेकी थिएँ। पाँच मिनेटमा संशोधन गरेर पठाईदिनुहोस् । म कहाँ पाँच मिनेटमा काम सकिन्छ। १५ मिनेटमा अध्यादेश जारी हुन्छ भनेकी थिएँ। तर, प्रधानमन्त्रीले मेरो क्याविनेटले मान्दैन, त्यो संम्भव छैन भन्नुभयो। अब त्यो कुरा सकियो, त्यो कुरा गर्नु परेन,’ उनले भनिन्।
फेरि राष्ट्रपतिले अध्यादेशको प्राविधिक पक्षबारे कुरा गरिन, ‘तपाईसँग अध्यादेशको बारेमा केही प्राविधिक कुरा पनि उठाएकी थिएँ। त्यसमा पनि अब मैले सोधिरहनुपरेन।’
राष्ट्रपतिको संकेत राष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली अनुसार महिला, दलित र अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी निर्वा्चित हुन्छन्? भन्ने उनको पहिलेको चासोतर्फ थियो। केही वकिल तथा संविधानविद्हरूले एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधान सम्मतनै भएपनि राष्ट्रिय सभामा आरक्षणको व्यवस्थाका कारण यो प्रणाली अनुसार चुनाव गराउन सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधान सम्मत भएर नभएको बारे पनि आफ्नो धारणा राखिन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि अनौपचारिक रूपमा अध्यादेश संविधान विपरित रहेको जिकिर गर्दै आएको थियो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधानमै नलेखिएकोले यो असंवैधानिक भएको उसको तर्क थियो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली पनि समानुपातिक चुनाव प्रणालीकै एक प्रकार भएको भन्ने धेरै संविधानविदहरूले प्रष्ट पारेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे धारणा परिवर्तन गरेको संकेत देखिएका छन्।
‘सबै दललाई एकैपटक बोलाउँदा तनाव हुन्छ। त्यो मलाई अनुभव छ। त्यसकारण अलग रअलग दललाई बोलाएर कुरा गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अस्ति गठबन्धनलाई अलग बोलाएँ। उहाँहरूलाई पनि मिलेर निकास निकाल्नुहोस् भनेँ। त्यसपछि तपाईहरूलाई बोलाएको हो।’
अनि, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले लामो व्याख्या सहित बोले।
उनले भने— अध्यादेश एकल संक्रमणीय आधारमा आएको हो। संसदमा छलफल पनि भएको हो तर त्यहाँ सहमति हुन सकेन। एकल संक्रमणीयता हामीले धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोग गरेर आइरहेका छौं। हाम्रो देशमा र अरु मुलुकहरूमा एकल संक्रमणीय प्रणाली छ। राष्ट्रिय सभा भनेकै राष्ट्रिय सरकार जस्तो हो। सबैको प्रतिनिधित्व भएको। नामाकरणबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा जस्तो हैन। यो ‘एल्डरल्ली’हरूको सभा हो, यसमा अलिकति परिपक्वता हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले अलि अपरिपक्व काम गर्न थाल्यो भने पनि राष्ट्रिय सभाले परिपक्वता ल्याउँछ भन्ने आशा गरेर यो संस्थाको बनाइएको हुन्छ।
अहिले सबै कुरा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनको कानूनको अभावमा हो। सहमति नजुटेकाले संसदमा कानून बनाउन सकिएन। सरकारले विधेयक ठिक ल्यायोर ल्याएन भन्ने कुरा आजका दिनमा असान्दर्भिक बहस हो।
म मान्छु, राष्ट्रिय सभा गठन विधेयक संसदले पारित गर्नुपर्थ्यो। तर संसदबाट ऐन बन्न सकेन। ऐन पारित हुन नसकेपनि कानून त चाहियो। त्यसका लागि अध्यादेश एक मात्र बाटो थियो। सरकारले अध्यादेश तपाईकहाँ बेलैमा पठाएको हो। यो अहिले पठाएको होइन।
एकल संक्रमणीय अहिलेको संविधानमा छर छैन कानूनसम्मत छर छैन भन्ने बहस पनि चलाएको छ। त्यो बहसबारे पनि यहाँ केही भन्न चाहन्छु।
कतिपयले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधानमा लेखेको छैन भनेर तर्क गरेका छन्। एकल संक्रमणीय प्रणाली पनि समानुपातिक प्रणालीकै एउटा रूप हो। त्यसकारण, यो संविधानमा छैन भन्ने तर्क जायज छैन। संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि त्यो कानूनले निर्धा्रित गर्ने विषय हो। यो संवैधानिक वा असंवैधानिक हो भनेर अल्झिनु ठिक हुन्न।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको गठन एक अर्कासँग जोडिएको छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नु पर्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन।
पहिलेको विधेयक पनि सहमति भएर संसदको पूर्ण बैठकमा गइसकेको थियो भन्ने कुरा सही होइन। पछि अध्यादेशमा धेरै पटक छलफल भयो। कानूनमन्त्रीका हैसियतले म आफैँ त्यस्ता धेरै छलफलमा भाग लिएको छु। एमाले, माओवादीका को रको नेता सो छलफलमा सहभागी थिए, म नामै भन्न सक्छु।
कांग्रेसका सबै नेताले बोलिसकेपछि, राष्ट्रपतिले भनिन,’ सबै पार्टीहरूसँग कुरा गरेपछि सहज हुन्छ, सहजीकरण हुन्छ। तपाईहरूले बोलेको कुराबाट धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ।’
कांग्रेस नेताहरूमध्ये कसैले भन्यो, ‘हामीले त हाम्रो कुरा भन्यौं। राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुभयो कि भएन हाम्रो कुराबाट? हामी के निष्कर्ष लिएर जाऔं?’
राष्ट्रपतिले प्रष्ट केही भनिनन्। अन्तिममा उनले यति मात्र भनिन, ‘सहमति गरेर अघि जानुपर्छ।’ अन्यन्त सन्दर्भिक भएकोले सेतोपाटी अनलाईनको प्रकाशनलाई सन्र्दभ सामग्री रुपमा यो आलेखमा समेत समेटिएको हो ।
यसरी राष्ट्रपतिले सविधान सम्मत रुपमा आएको अध्यायदेसलाई नेपालको सविधान अनुसार स्वीकृत गर्नुको कुनै विकल्प देखिदैन। कुनै पनि पक्षबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा पार्नहुदैन । यस अगाडि नेपाल सेनाका तत्कालिन सेनापति रुकामाङगत कट्वाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा परियो। भलै त्यो संक्रमण काल थियो । तपनि त्यसलाई एकपक्षले असवैधानिक कदम नै भनिएको थियो । तर अहिले सविधान सभाले सविधान जारी गरीसकेको अवस्था र सविधान अनुसार तीनवाटै तह स्थानीय, प्रादेशसभा र प्रतिनिधी सभा समेतको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको एवं राजनितिक स्थिरता प्रराम्भ भईसकेको अवस्थामा सवैधानिक प्रवन्ध अनुसार नै सबै काम कारवाही अगाडि बढ्नु पर्दछ । राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ हुन सक्छन तर राष्ट्रपतिको स्वार्थ भनेको सविधान, मुलुक र जनता नै हो । नया जनादेश अनुसार बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण हुनु आजको पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । जनादेश पनि यही हो जनादेशलाई कुन्ठित गर्ने काम कही कतैबाट गरिनु हुदैन। अध्यायदेस स्वीकृति आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।
पत्रकार एवं सह प्रवक्ता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक